1628s &quot;LIFT-OFF&quot; | တရားဝင် IAOT? စာရွက်စာတမ်း images and subtitles
ဒီဗီဒီယိုမစခင်မှာစီမံကိန်းကို ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားအပြီးမကြာခင်မှာပဲစတင်ခဲ့တယ်။ ခရီးစဉ်သည်အောင်မြင်စွာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ DPR သည်စီမံကိန်းအသစ်များမှစတင်ခဲ့သည်။ - မရေမတွက်နိုင်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုလိုအပ်သောစီမံကိန်းများ။ ဤဗီဒီယိုသည်“ မည်သူမည်ဝါရှိပါသလော” ဖြစ်သည်။ ဒီဗီဒီယိုကိုမဖြန့်ချီမီသုံးလအလိုတွင်ယူခဲ့ပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၏မြင်ကွင်းများသည်စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြသသည်။ - မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအမျိုးမျိုး၊ ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးများ၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်း။ ၎င်းတွင် DPR ၏သမားရိုးကျမဟုတ်သောနှင့်လေးနက်သောရှုထောင့်များ၊ လုံးဝလွတ်လပ်သောဖျော်ဖြေရေးတံဆိပ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်မက်သည့်သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုပါ ၀ င်သည်။ DPR မှ Ian: မင်္ဂလာပါ။ နေကောင်းလား အမ် ... ဒါ ... အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ John သည်ဤအယ်လ်ဘမ်၏ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုမည်သို့ရိုက်ကူးရမည်ကိုစဉ်းစားနေသည်။ အစမှအဆုံးအထိ အမ် ... ငါကအေးဆေးမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် နောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကိုပြရန်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်း DPR ဘာပြမလဲ။ ပြီးတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အထိရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပြတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းရဲ့အတွေးတွေကိုငါ့ကိုပြောပြပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်မင်္ဂလာပါ အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိမီ3လ DPR LIVE: ဟုတ်ကဲ့၊ လူတွေကဒါကိုကြားရင်တစ်ခုခုခံစားရလိမ့်မယ်။ Ian - ဟုတ်တယ်။ LIVE: မမျှော်လင့်ဘဲမင်းကိုအထင်ကြီးလေးစားမယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒီသီချင်းကိုနားထောင်နေစဉ်။ "HERE GOES NOTHING" မှ "GERONIMO" မှ LIVE - "ကြားဖူးတာပေါ့။ အိုး" ဒါငါမျှော်လင့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ Ian: ဟုတ်ကဲ့၊ LIVE -“ မင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်လှုပ်နေရတာလဲ” DPR REM - ဆက်လုပ်ပါ ဦး ။ လေယာဉ်အသံကိုလျှော့ချပါ အကယ်၍ သင်သည်အခြားသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်အသံများကြားတွင်ဆုံမိလျှင် LIVE: * အသံအကျိုးသက်ရောက်မှု * မေလမေဂျာလ REM: ထိုအခါကပိုပြီးမှန်ကန်အသံ။ ဒီလိုနည်းနဲ့မင်းကသိသာထင်ရှားတဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်စရာမလိုဘူး။ သဘာဝကျကျသင်နောက်အပိုင်းသို့ဆက်သွားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အခုငါတို့ကြည့်နေရင်၊ အတူတူနေရင်တောင် \_ t ဒါမှမဟုတ် "hyper loop" နည်းနည်းလောက် Star Wars ကဲ့သို့“ zoom” ကဲ့သို့တစ်ခုခုလုပ်သည့်အချိန်များရှိသည်။ သငျသညျသူတို့အား LEDs အနည်းငယ်ပတ်ပတ်လည်စေနိုင်သည်ဆိုပါက Ian: နောက်ကျောကကြည့်ပြီးရှေ့ကိုကြည့်ပါ နည်းနည်းပိုထွက်လာရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဒါငါ့ရဲ့အရသာပဲ။ တစ်ခုခု ... သတ္တုကြီးလှ၏။ ဒီတော့မင်းမှာနောက်ဆုံးအခန်းရှိတယ် ဒါကြောင့်ဒေးဗစ်ကင်မရာရှေ့မှာရပ်နေလိမ့်မယ်။ တဖန်သင်တို့က "s ** t လိမ်လူကိုမရကြဘူး။ ဆက်လုပ်ပါ၊ ငါလုပ်နိုင်မယ်” ထိုအခါတံခါးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်ခုန်။ REM: အဲဒီရိုက်ကူးမှုဟာ "NEON" လား။ Ian: ဟုတ်ကဲ့၊ အားလုံးကိုတပြိုင်နက်ရိုက်မယ်။ သင်ချက်ချင်းယူနိုင်သည် သင်သိ, သင်သည်များစွာသောအမှုတို့ကိုပြုနိုင်သည် ... ဒါကငါစဉ်းစားသင့်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်။ REM: ထိုအခါသူတို့ထဲကတ ဦး တည်း လှည့် ... ဒီလိုပဲ အခုဘယ်လိုယူမလဲ သင်ဒီမှာအနိုင်ရနိုင်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ် ဒီအစု၌။ REM: ငါတကယ်ကောင်းတဲ့ထုပ်ပိုးစီဒီဒီဇိုင်းကိုရခဲ့တယ်။ Ian: တကယ်ဟုတ်လား ဒါကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပါသလား REM: ငါ (စီဒီဒီဇိုင်းအနုပညာရှင်) နဲ့အတူလုပ်ခဲ့တယ်။ အာကာသထုပ်ပိုး Ian: ဟေ့အေး နောက်အဆင့် REM: ဒီဟာနောက်အဆင့်မဟုတ်လား။ Ian: ငါစဉ်းစားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ REM: ဒီဟာကဘယ်လောက်အေးတာလဲသိလား။ Cline - တစ်ခုပြီးတစ်ခုနားထောင်ကြည့်ရအောင်။ CREAM - နောက်ကျောကို string သို့ဆွဲရပါမယ်။ LIVE: ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ဆွဲနေစဉ်“ ပျောက်ကွယ်သွား” သောခံစားမှုရဖို့လိုသည်။ REM: ယုတ္တိနည်းဖြင့်ပြောခြင်း သငျသညျသုံးဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်နှစ်ခုစေခြင်းငှါသွားပါ အဲဒါကမင်းကိုပိုပိုအားပေးမှာလား။ အဲ့ဒါပဲ ... LIVE: ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ သနားတာပဲ ရုံ ... ငါတို့စိတ်ကူးသမျှ Ian: ဟုတ်တယ်။ LIVE - ကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေသိလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ Ian: အခုပိတ်သွားပြီ ဒီဟာအရမ်းခက်ပါတယ် ... တစ်ခုခုပိုပြီးရှုပ်ထွေးသည်။ အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာကငါတို့မှာရှိတဲ့ element တွေကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည် ငါပုံပြင်ကိုတတ်နိုင်သမျှစိတ်ကူးနေတယ်။ အဲဒီအစားကျနော်တို့စိတ်ကူးသွား။ သွားခဲ့ကြသည်ကိုညွှန်ပြလျှင် ယခုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်နှင့်အမျှလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားမည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဟာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ် ပြproblemsနာများစွာရှိခဲ့သည်။ REM: ငါထင်ထားတာထက်ကွဲပြားသွားတယ်။ Davin ရဲ့အချိန်ကကုန်သွားပြီ ရောမမွို့မှာ, ငါဒီဇိုင်းကိုငါထင်ထက်ကွဲပြားခြားနားထွက်လာ၏။ ရုံ ... အရာအားလုံး ... ဝတ်စုံ။ ငါတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး မင်းဒီနေရာမှာမောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့် ... ငါနောက်တဖန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရှိသည်။ တိုက်ရိုက်: အဆင်မပြေ? Ian: ဟင့်အင်း၊ ငါဘာကြောင့်ပြောင်းလဲတာလဲမသိဘူး အနည်းငယ်ထူးဆန်းသောတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာစာသားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ "အိုး, အနိမ့်တယ်, အနိမ့်တယ်" ဒီတော့ CREAM ကပိုပြီးသဘာဝကျစေမှာပါ။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒီအသံကရိုက်တယ် ဒါဟာစန္ဒရားအစိတ်အပိုင်းအတွက်သဘာဝဖြစ်လိမ့်မည်။ ခရက်။ အရင်ဆုံးလုပ်ရအောင်။ တိုက်ရိုက်: ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ပါ။ LIVE: အမွေအနှစ် သင်ကဒီဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အားကြီးသောအသံဖြင့် အိုးသူကပြောတယ်ပျော်စရာ! Ian: ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကနည်းနည်းပိုပါတယ် မင်းခံစားရတယ် အယ်လ်ဘမ်မဖြန့်ချိမီ2လ REM: လိမ္မော်ရောင် Eunbyeol (stylist) - လိမ္မော်ရောင်လား။ လိမ္မော်ရောင်ကျွန်တော်မလုပ်ရသေးပါဘူး လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သင့် REM: ဒီဟာကောင်းတယ်၊ လိမ္မော်ရောင် အိုးစောင့်ပါ၊ အမှတ်တံဆိပ်ကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့သလား။ အနက်ရောင် လူတိုင်းကဒါကိုကြိုက်တယ် Jeong Geun (stylist) - အဲဒါကိုငါ့လက်တွေမချွတ်နိုင်ဘူး။ REM: ပထမ ဦး စွာ Jun Yong (Stylist Ashe) မျက်နှာဖုံးနှစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကမမှန်ဘူး REM: ထုံးစံလား။ Eunbyeol: ဘေးနားကမျက်နှာဖုံးကြိုးလိုမျိုးတစ်ခုခုရှိရင်ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ သင်ဤကဲ့သို့သောဤနေရာတွင်ပူးတွဲနိုင်သည် ကျွန်ုပ်ဤကဲ့သို့သောကြိုးလိုအပ်ပါတယ် REM: ငါဆိုလိုတာကငါသိတယ်။ Ian: ငါစဉ်းစားခဲ့ပြီးပြီ အကယ်၍ Dabin တွင် bandana သို့မဟုတ်အနက်ရောင် bandana ရှိနိုင်လျှင်၊ ငါ့ဘက်ခြမ်းကိုဖုံးအုပ်နိုင်အောင်။ REM: ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် ငါအသံကြိုက်တယ် Eunbyeol: Davin ကချွတ်လိုက်ရင်ဒါအဆင်ပြေပါတယ် LIVE: အဆုံးလား။ Silver Star: ကောင်းပြီ။ Ian: ဘယ်လိုလဲ လမ်းလျှောက်လို့ရမလား? သင်ရွှေ့လို့ရမလား LIVE: ဟုတ်တယ်၊ အဆင်ပြေတယ်။ Ian: ဒါကမင်းရဲ့အိတ်နဲ့ချည်ထားလိမ့်မယ်။ LIVE: ဟုတ်တယ်။ Ian: ကောင်းပါပြီ။ DPR သည်ဤအယ်လ်ဘမ်အတွက်ကြီးမားသောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း လမ်းကြောင်းများစွာနှင့်မပြီးဆုံးသေးသောသရုပ်ပြများစွာမပြည့်စုံပါ။ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအသည်းအသန်ကြိုးစားသည် Live သည်တိုတောင်းသောခရီးစဉ်ကိုတောင်း။ မြို့နှင့်ဝေးရာနေရာတစ်ခုတွင်သီဆိုခဲ့သည်။ LIVE: ငါပြောင်းလဲပစ်ရန်အေးမြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ... ပြည်သူ့ ဥပမာ - Ow, Rap CREAM - အိုး၊ အရမ်းကောင်းတယ် LIVE: အလုပ်ကြိုးစားပါ ... ကျန်းမာအောင်စားပါ။ Stunt အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ - မင်းခံစားချက်ရရင်ငါတို့အခုရိုက်နေပြီ ကင်မရာဆက်တင်များနှင့်ကိုက်ညီရန် အဲဒီမှာသေးငယ်တဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံအောင်နေစဉ် မင်းလုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ် LIVE: ဟုတ်တယ်။ ငါကြည့်တယ် Ian: Ninja ... Ninja လိပ် ... ကောင်းတယ် ~ ဘဝ -“ အလားအလာ” [ရိုက်ကူးရေးနေ့မတိုင်ခင်] Ian: ဟိုမှာကြည့် အဲဒါထွက်လို့မရဘူးလား။ ဒါတွေအားလုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာပိုကောင်းလား။ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာလား Hmm ကောင်းပြီ၊ အဆင်ပြေပါတယ် [ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနေ့] REM: ငါဒီကိုယူသင့်သလား။ JunYong - ဟုတ်တယ်။ အဲဒီလိုပဲ Cline: ငါလား ငါရပ်လိုက်တဲ့အခါငါအနည်းငယ်ရပ်တန့် Yongwoo (မန်နေဂျာ) - ဟေ့၊ မင်းအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ Cline: မရပ်ရ၊ တံတားမ ... Ian: သွားကြရအောင် ... သွားကြရအောင် ... Hoin (ဒါရိုက်တာ) ။ လုပ်ပါ။ ကမ္ဘာမြေ အခုဒီအဖြူရောင်အရောင်လား? ဟင်။ အိုး။ ဒီ“ ဥပဒေရေးရာ” အဝတ်လား။ LIVE: အိုးဒါကရက်ပ်အပိုင်းလား။ Ian - ဟုတ်တယ်။ ပထမတော့ဒီလိုမျိုးစမယ်။ အိုကေ၊ ဒါဆို NEON ဆိုပါစို့။ ဒါပေမယ့် "LEGACY" ဟာတူညီတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့စတာပါ။ JunYong: ငါဝေးတယ်။ အဲဒါကိုဖြည် REM: မလင်းဘူး ချွေးကြောင့်လို့ထင်တယ် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး - မင်းအသက်မရှူနေဘူးလား။ Ian: အဆင်ပြေပါတယ် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှူး (Kim Min-chan) မင်းကမီးခိုးမြူတွေဖြန်းလား။ mod: မီးခိုးမြူ! LIVE - ကောင်းပြီ။ Ian: အဲဒါမင်းရဲ့လက်ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်။ အိုကေလား ထို့နောက်ကျသောအခါသင်ဖမ်းလိုက်သည်။ LIVE - ဒီတစ်ကြိမ်ထပ်လုပ်ကြည့်ရအောင်။ Ian: ခင်ဗျားထပ်လုပ်ချင်လား။ သင်ကခလုတ်ကိုထိနေတယ် အမြင့်ပြောင်းပါ သင်အမှန်တကယ်ကကားမောင်းနေကြသည်။ Yongwoo: Dabin၊ မင်းအဲဒီကိုသွားရမယ်။ Cline: Day2Ian: Day2အေးမြ ငါရုပ်ရှင်ရုံမှာကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ဒါကအတိအကျပဲ။ သေချာတာပေါ့ “ Space Odyssey” နှင့်“ Star Wars” တို့သည်အလွန်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ငါကြီးပြင်းလာတာမြင်ခဲ့သမျှ ယခုငါတို့ဒီမှာသွား။ Geronimo လှုပ်ရှားမှု ... ! ရှေ့ကင်မရာနှင့်အတူ ... သိပ်ပျော်စရာမဟုတ်လား ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုရှိတယ် သင်ခြံစည်းရိုးအဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်သည် စွမ်းအင်ဖြင့် ... ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ငါသွားမယ်! REM: ဒါပါပဲ။ Kurt! သွားကြကုန်အံ့! အဲ့ဒါပဲ! အီနန် - ထ ... ငါဘေးထွက်ကြည့်နေပါတယ် LIVE - ကောင်းပြီ။ Ian: အားလုံးကောင်းပါတယ်အားလုံးကောင်းပါတယ်။ အစ်ကိုကျော်ပြီ။ ဟုတ်တယ်၊ ပြီးသွားပြီ။ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ: ကောင်းမွန်သောအလုပ်! အလုပ်ကောင်း အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိမီ 1 လ [Mixing Studio] REM - အပိုင်းနှစ်ပိုင်းစလုံးသည်ယဇ်ပူဇော်ဖို့လိုသည်။ ကျနော်တို့အနုပညာဆီကိုအရမ်းဝေးသင့်တယ်မထင်ဘူး ဥပမာအားဖြင့်“ အိုး၊ ဒီ decibel ကိုအနည်းငယ်နည်းနည်းလျှော့ဖို့လိုတယ်။ ” ဒီလိုပဲ ဟုတ်တယ်၊ ငါထပ်လုပ်လို့ရပြီ ဒါပေမယ့်ငါတို့မပြန်ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ၊ Ian: ဒါပေမဲ့ဒါ ... REM: ငါတို့နောက်ကျမယ်ဆိုရင် ဒါပေမယ့်ငါက ၁၀၀ ရာနှုန်း၊ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းနောက်ကျမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် ဒီစောင့်ကြည့်နေကြသူတွေကိုပြောပြရန် ငါတို့တကယ်နီးကပ်လာပြီ။ ငါ့အခန်းကဏ္ in ရှိလူတိုင်းအတွက် ဤအရာသည်စိတ်ဖိစီးမှုအများဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ကြသည် ငါတို့အချင်းချင်းမွမ်းမံတယ် ငါကဤအရာအားလုံးကိုထုပ်ပိုးမယ်ဒါကြောင့်ငါနောက်ဆုံးမိတ္တူကို mastering ပေးပို့နိုင်ပါတယ် ... ငါအခုတော်တော်လေးစိတ်ဖိစီးမှုတယ် String ဒါရိုက်တာ - ၉၃ နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်မှကူးယူပါ။ ငါ Tremolo အကြာတွင်အလားတူပြုလိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ် လက်ရှိသီချင်း "KISS ME" နှင့် "NO RESCUE NEEDED" ၏ကြိုးများကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်အဖွဲ့သည်ဂီတဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ရောနှောခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်အချိန်အကန့်အသတ်များနှင့်သတ်မှတ်ရက်များအရ DPR သည်သူတို့၏ကျန်ရှိနေသေးသောအချိန်ကိုမည်မျှထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုဖန်တီးရန်လိုသည်။ REM: ယနေ့ငါနှင့် Cream အင်ဂျင်နီယာများမှပေးပို့သောပေါင်းစပ်မှုအားလုံးသည်မှတ်စုတိုမှတ်စုများဖြစ်သည်။ ငါတို့အတူတကွစုစည်းပြီး Dabin ကိုနောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုများတောင်းခံပါတော့မယ်။ တိုက်ရိုက်: ဒါ ... နေ့ (x9) နောက်ထပ် ... ရှေ့ပေါ် ... ရှေ့ချိတ်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်နည်းနည်းနဲ့ကိုက်ညီမယ်လို့မထင်ဘူး ... Lowe ... တစ်ခုခုပဲ "အိုး - အိုး" ဒါဒီလိုဖြစ်လာတယ် ... လိုအပ်ချက်များ ... "အိုးအိုး" မှ Ian: ဤကဲ့သို့သောအသံလိမ့်မယ် ... အလွှာအလွှာ။ LIVE -“ ဒါဆိုငါရိုက်တယ်” … Ian: မှန်တယ်၊ ၎င်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအသံရှိပါသလား။ LIVE ။ LIVE & IAN: အိုး၊ နောက်ဆုံးတစ်ခု၊ နောက်ဆုံးတစ်ခု။ တိုက်ရိုက် - နားထောင်ပါ။ Ian: အသံကိုဖွင့်ပါ။ Ian: မူလကဘာလဲ REM: ဒါဟာနိမ့်ပါတယ် Ian: ဟုတ်တယ်။ ငါ ... ဒါပေမယ့်ငါကပိုအသုံးပြုတယ်။ REM: ငါဒီထက်ပိုပြီးလုပ်နေတယ်။ အိုကေ ~ Ian: "ဒီမှာဘာမှမဖြစ်" ၏သံပြိုင်ကစားနေပါတယ်။ ငါဒီသီချင်းကိုလူ ၆၀ ပါ ၀ င်ပုံပေါက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။ ဒါမလွယ်ဘူး ကောင်းပြီ၊ နားထောင်ကြရအောင် LIVE: အိုကေအိုကေအိုကေ ဟုတ်တယ် အခုပြီးသွားပါပြီ ဒီသီချင်း ... လာမယ့်သီချင်းနေတုန်းပဲ။ အခုငါလုပ်မယ့်အရာက NEON နိဂုံးဖြစ်တယ် မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ “ မင်းရဲ့အနမ်းတွေကငါ့ကိုလှည့်စားစေတယ်” သို့မဟုတ်စာသားများကဆက်ပြောသည် “ မင်းရဲ့အနမ်းတွေကနီယွန်၊ နီယွန်တွေထွက်လာတယ်” ထွက်လာသည် ငါကအေးတယ်ထင်တယ် အဆိုပါသံပြိုင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို "Neon" လို့ခေါ်တယ် လူတွေဟာနီယွန်ကိုတွေ့မြင်ခံစားနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ငါဆိုလိုတာကမင်းသိလား ဒီတော့ မသေချာဘူး Ian: အိုကေ ... ကောင်းတယ်ထင်တယ် LIVE: ထိုအခါ "ခရမ်းရောင်၊ အပြာ၊ ခရမ်း၊ ပန်းရောင်" နောက်မှ "you" ဟုပြောပါ။ Ian - ကောင်းပါပြီ။ ငါလောက်ပြီထင်တယ် ဒါပြီးပြီလို့ငါထင်တယ် ရောနှောခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့သည်ထာဝရအဆုံးသတ်ပုံမပေါက်သောနောက်ဆုံးတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ရောစပ်ခြင်းပြီးဆုံးပြီ။ master studio သို့သွားရန်အချိန်တန်ပြီ ... တိုက်ရိုက်: မာစတာ CREAM - အဆင်ပြေပါတယ်။ Awesome LIVE: အဲဒါတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ ငါ "ကယ်ဆယ်ရေးမလိုအပ်" ၏အဆုံးအရေးကြီးသောထင်ပါတယ် အသံမထွက်ခင်ဒီမှာရပ်နားကြရအောင် ကျွမ်းကျင်သူဒါရိုက်တာ။ REM: အစ်ကို၊ LIVE: ငါမကြာခဏလာလိမ့်မည်။ REM: ကျွန်တော့်အစ်ကိုလည်းလာကစားသည်။ မာစတာဒါရိုက်တာ: ငါကစားသွားကြဖို့ရှိသည် ... CREAM - ကျွန်တော့်အစ်ကိုလည်းအလုပ်များနေတယ်။ [Teaser ထုတ်ပြန်သည့်နေ့] Yongwoo: အရမ်းကိုအေးဆေးပဲ။ ငွေစတား။ Ian - သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ... REM: အဲဒါကို Vimeo မှ 4k HD ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ချခဲ့သည်။ Ian: 4k ဟာအနည်းငယ်မှောင်မိုက်နေတယ်။ ဒါကြောင့် REM: stop ။ စိတ်အေးအေးထားပါ REM: မင်းကထူးဆန်းတဲ့ဆေးတစ်ခုယူခဲ့တယ်။ သင် 4k လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကိုသောက်ခဲ့တယ်။ Ian: မဟုတ်ပါ။ ဤသည်မှာအလုပ်ခွင်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ REM: အမှတ် ၎င်းသည် "အသုံးမကျသောရောဂါ" ဖြစ်သည်။ Ian: ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်မရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ တိုက်ရိုက်:4မိနစ် ၃ မိနစ်သာကျန်တော့သည်။ မုန့် - သင်နှင့်စတင်ပါ တိုက်ရိုက်: ၂ မိနစ် ကမ္ဘာကြီးကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ကမ္ဘာကြီးကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ငါအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့မထင်ဘူး အိုး ငါ upload တင် !!! CREAM & Silver Star - သင်တင်ပို့ခဲ့သလား။ Ian - ကျွန်ုပ်၏ ၁၀၁ ကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုကိုကြိုဆိုပါသည်။ ဒါငါ့အိမ်သေးသေးလေးပါ။ ငါ့အိမ်မှာတည်းဖြတ်ရတာကိုကြိုက်တယ် ငါ့ကိုနှစ်သိမ့်လို့ပဲ ဒီတစ်ခုရှိတယ် ရီ: ငါ ... ကျေးဇူးပြု၍ ကျွမ်းကျင်ပါ ယခုငါ "LEGACY" တည်းဖြတ်နေပါတယ်။ ဒါကပထမဆုံးဂီတဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းပဲ။ တည်းဖြတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်း၏ ၆၀-၇၀% ခန့်ဖြစ်သည် ကြွင်းသောအရာစီစဉ်, ရိုက်ကူးနေကြတယ် ... ကောင်းတယ် ဒီဗီဒီယိုကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုက Da Vin ဟာစကြဝnewာအသစ်ကိုရောက်လာပြီလို့ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကအဓိကအချက်ပဲ။ အယ်လ်ဘမ်သည်မည်သည့်နေရာမှမရှိဤသည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနေသော“ DPR စကြဝuniverseာ” အသစ်သို့ခရီးဖြစ်သည်။ ဒါကအစပဲရှိသေးတယ် ရေခဲတောင်၏အစွန်အဖျား ဂိမ်းကစားတာနဲ့တူတယ်။ ကျနော်တို့အဲဒီမှာကျော်အနည်းငယ်မှန်ဘီလူးမီးတောက်ချသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင်ဖယ်ရှားလိုက်ရင် ... ငါ့မျက်နှာပျောက်သွားတယ် ... တေးဂီတဗီဒီယိုအားပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်သည် အဖွဲ့သည်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဂီတဗီဒီယို Premiere နှင့် album နားထောင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ - @ iiseseoul REM: xx ကိုသွားရအောင် KK: Damm REM: ဒါကိုဘယ်သူလုပ်တာလဲ။ TK & KK: မှန်တယ် (x3) KK: Rom (IAN) xx ငါဖျားနာနေတယ်။ xx LIVE: ငါဒီလိုတုန့်ပြန်လို့ငါပျော်တယ် KK: ပရိသတ်များဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာငါမသိဘူး အရူး ဘာမှမရှိဘူး။ TK: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားစီမံကိန်းများကိုကြည့်ပါကဂီတကောင်းလျှင်ဗီဒီယိုသည်အနည်းငယ်နည်းနေသည်။ ချို့တဲ့သည်။ REM - အားနည်းတဲ့ချိတ်ဆက်မှု KK: ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ ဒါရူးတာပဲ အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲ တိုက်ရိုက်: ၃၇ မိနစ် ငါစိုးရိမ်လာတယ် REM: ငါတို့ကယောက်ျားတွေထက်ပိုပြီးကြောက်ကြတာပဲ! LIVE: ဒီခံစားချက်ကတကယ်ကို ... ဒါကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးရည်းစားထက်ပိုပြီးတုန်နေတယ် မင်းရူးနေလား မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ငါအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့မထင်ဘူး Ian: ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ။ မှတ်ချက်များကဘာတွေလဲ။ LIVE: အထက်မှဖတ်၊ ဖတ်၊ ဖတ်ပါ။ Guhyo (ဒရမ်သမား) ၁၀ မိနစ် REM - လူတိုင်းကအဆင်သင့်ပဲ။ LIVE: အိုး၊ REM: ငါ skydiving လို့ထင်တယ် LIVE ။ ဟာရစ် (ဘေ့စ်) - အိုး။ တစ်မိနစ်ကျန် အာ ထွက်လာ!
&quot;LIFT-OFF&quot; | တရားဝင် IAOT? စာရွက်စာတမ်း
< start="2.06" dur="3.94"> ဒီဗီဒီယိုမစခင်မှာစီမံကိန်းကို ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားအပြီးမကြာခင်မှာပဲစတင်ခဲ့တယ်။ >
< start="6" dur="6"> ခရီးစဉ်သည်အောင်မြင်စွာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ DPR သည်စီမံကိန်းအသစ်များမှစတင်ခဲ့သည်။ - မရေမတွက်နိုင်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုလိုအပ်သောစီမံကိန်းများ။ >
< start="12" dur="6"> ဤဗီဒီယိုသည်“ မည်သူမည်ဝါရှိပါသလော” ဖြစ်သည်။ ဒီဗီဒီယိုကိုမဖြန့်ချီမီသုံးလအလိုတွင်ယူခဲ့ပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ >
< start="18" dur="6.4"> ဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၏မြင်ကွင်းများသည်စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြသသည်။ - မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအမျိုးမျိုး၊ ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးများ၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်း။ >
< start="24.42" dur="6.6"> ၎င်းတွင် DPR ၏သမားရိုးကျမဟုတ်သောနှင့်လေးနက်သောရှုထောင့်များ၊ လုံးဝလွတ်လပ်သောဖျော်ဖြေရေးတံဆိပ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်မက်သည့်သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုပါ ၀ င်သည်။ >
< start="40.02" dur="1"> DPR မှ Ian: မင်္ဂလာပါ။ >
< start="41.82" dur="1.08"> နေကောင်းလား >
< start="42.9" dur="1.4"> အမ် ... >
< start="44.3" dur="1.2"> ဒါ ... >
< start="45.5" dur="10.7"> အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ John သည်ဤအယ်လ်ဘမ်၏ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုမည်သို့ရိုက်ကူးရမည်ကိုစဉ်းစားနေသည်။ >
< start="56.68" dur="2.32"> အစမှအဆုံးအထိ >
< start="59" dur="2.08"> အမ် ... ငါကအေးဆေးမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် >
< start="61.92" dur="2.86"> နောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကိုပြရန်။ >
< start="64.78" dur="2.62"> မင်းသိတဲ့အတိုင်း DPR ဘာပြမလဲ။ >
< start="67.52" dur="1.96"> ပြီးတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အထိရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပြတယ်။ >
< start="70.38" dur="2.04"> ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းရဲ့အတွေးတွေကိုငါ့ကိုပြောပြပါ။ >
< start="73.08" dur="2.08"> အားလုံးအဆင်ပြေတယ်မင်္ဂလာပါ >
< start="75.88" dur="2"> အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိမီ3လ >
< start="90.88" dur="3.42"> DPR LIVE: ဟုတ်ကဲ့၊ လူတွေကဒါကိုကြားရင်တစ်ခုခုခံစားရလိမ့်မယ်။ >
< start="94.3" dur="0.96"> Ian - ဟုတ်တယ်။ >
< start="95.84" dur="3.28"> LIVE: မမျှော်လင့်ဘဲမင်းကိုအထင်ကြီးလေးစားမယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒီသီချင်းကိုနားထောင်နေစဉ်။ >
< start="99.44" dur="1.84"> "HERE GOES NOTHING" မှ "GERONIMO" မှ >
< start="101.66" dur="3.66"> LIVE - "ကြားဖူးတာပေါ့။ အိုး" ဒါငါမျှော်လင့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="105.32" dur="0.58"> Ian: ဟုတ်ကဲ့၊ >
< start="106.08" dur="2.28"> LIVE -“ မင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်လှုပ်နေရတာလဲ” >
< start="109.46" dur="1.16"> DPR REM - ဆက်လုပ်ပါ ဦး ။ >
< start="113.3" dur="1.9"> လေယာဉ်အသံကိုလျှော့ချပါ >
< start="115.2" dur="1.18"> အကယ်၍ သင်သည်အခြားသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်အသံများကြားတွင်ဆုံမိလျှင် >
< start="116.38" dur="1.66"> LIVE: * အသံအကျိုးသက်ရောက်မှု * မေလမေဂျာလ >
< start="118.04" dur="1.12"> REM: ထိုအခါကပိုပြီးမှန်ကန်အသံ။ >
< start="119.98" dur="4.22"> ဒီလိုနည်းနဲ့မင်းကသိသာထင်ရှားတဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်စရာမလိုဘူး။ >
< start="124.7" dur="2.38"> သဘာဝကျကျသင်နောက်အပိုင်းသို့ဆက်သွားနိုင်သည်။ >
< start="127.1" dur="5.1"> ဒါကြောင့်အခုငါတို့ကြည့်နေရင်၊ အတူတူနေရင်တောင် \_ t >
< start="132.22" dur="2.6"> ဒါမှမဟုတ် "hyper loop" နည်းနည်းလောက် >
< start="134.82" dur="2.62"> Star Wars ကဲ့သို့“ zoom” ကဲ့သို့တစ်ခုခုလုပ်သည့်အချိန်များရှိသည်။ >
< start="137.44" dur="3.42"> သငျသညျသူတို့အား LEDs အနည်းငယ်ပတ်ပတ်လည်စေနိုင်သည်ဆိုပါက >
< start="140.86" dur="2.96"> Ian: နောက်ကျောကကြည့်ပြီးရှေ့ကိုကြည့်ပါ >
< start="144.02" dur="4.18"> နည်းနည်းပိုထွက်လာရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ >
< start="148.2" dur="2.62"> ဒါငါ့ရဲ့အရသာပဲ။ >
< start="151.46" dur="4.08"> တစ်ခုခု ... သတ္တုကြီးလှ၏။ >
< start="155.54" dur="1.7"> ဒီတော့မင်းမှာနောက်ဆုံးအခန်းရှိတယ် >
< start="157.24" dur="3"> ဒါကြောင့်ဒေးဗစ်ကင်မရာရှေ့မှာရပ်နေလိမ့်မယ်။ >
< start="160.38" dur="3.16"> တဖန်သင်တို့က "s ** t လိမ်လူကိုမရကြဘူး။ ဆက်လုပ်ပါ၊ ငါလုပ်နိုင်မယ်” >
< start="163.68" dur="2"> ထိုအခါတံခါးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်ခုန်။ >
< start="165.68" dur="0.92"> REM: အဲဒီရိုက်ကူးမှုဟာ "NEON" လား။ >
< start="167.1" dur="2"> Ian: ဟုတ်ကဲ့၊ အားလုံးကိုတပြိုင်နက်ရိုက်မယ်။ >
< start="169.1" dur="1.62"> သင်ချက်ချင်းယူနိုင်သည် >
< start="171.22" dur="1.08"> သင်သိ, သင်သည်များစွာသောအမှုတို့ကိုပြုနိုင်သည် ... >
< start="172.32" dur="1.26"> ဒါကငါစဉ်းစားသင့်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်။ >
< start="173.58" dur="2.98"> REM: ထိုအခါသူတို့ထဲကတ ဦး တည်း >
< start="176.56" dur="1.36"> လှည့် ... ဒီလိုပဲ >
< start="179.44" dur="1.48"> အခုဘယ်လိုယူမလဲ >
< start="180.92" dur="1.86"> သင်ဒီမှာအနိုင်ရနိုင်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ် >
< start="183.28" dur="1.58"> ဒီအစု၌။ >
< start="184.86" dur="2"> REM: ငါတကယ်ကောင်းတဲ့ထုပ်ပိုးစီဒီဒီဇိုင်းကိုရခဲ့တယ်။ >
< start="187.08" dur="1.54"> Ian: တကယ်ဟုတ်လား ဒါကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပါသလား >
< start="188.62" dur="0.74"> REM: ငါ (စီဒီဒီဇိုင်းအနုပညာရှင်) နဲ့အတူလုပ်ခဲ့တယ်။ >
< start="189.36" dur="2.54"> အာကာသထုပ်ပိုး >
< start="193" dur="1.9"> Ian: ဟေ့အေး နောက်အဆင့် >
< start="194.9" dur="1.4"> REM: ဒီဟာနောက်အဆင့်မဟုတ်လား။ >
< start="197.34" dur="1.18"> Ian: ငါစဉ်းစားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="198.52" dur="1.4"> REM: ဒီဟာကဘယ်လောက်အေးတာလဲသိလား။ >
< start="216.36" dur="1.74"> Cline - တစ်ခုပြီးတစ်ခုနားထောင်ကြည့်ရအောင်။ >
< start="246.68" dur="2.38"> CREAM - နောက်ကျောကို string သို့ဆွဲရပါမယ်။ >
< start="249.06" dur="2.66"> LIVE: ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ဆွဲနေစဉ်“ ပျောက်ကွယ်သွား” သောခံစားမှုရဖို့လိုသည်။ >
< start="261.6" dur="1.96"> REM: ယုတ္တိနည်းဖြင့်ပြောခြင်း >
< start="263.94" dur="2.04"> သငျသညျသုံးဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်နှစ်ခုစေခြင်းငှါသွားပါ >
< start="266.9" dur="2.62"> အဲဒါကမင်းကိုပိုပိုအားပေးမှာလား။ အဲ့ဒါပဲ ... >
< start="273.86" dur="2.22"> LIVE: ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ သနားတာပဲ >
< start="276.26" dur="2.6"> ရုံ ... ငါတို့စိတ်ကူးသမျှ >
< start="279.7" dur="0.84"> Ian: ဟုတ်တယ်။ >
< start="280.54" dur="2.62"> LIVE - ကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေသိလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ >
< start="285.18" dur="1.04"> Ian: အခုပိတ်သွားပြီ >
< start="288.88" dur="1.38"> ဒီဟာအရမ်းခက်ပါတယ် ... >
< start="292.72" dur="2.92"> တစ်ခုခုပိုပြီးရှုပ်ထွေးသည်။ >
< start="298.1" dur="2.8"> အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာကငါတို့မှာရှိတဲ့ element တွေကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည် >
< start="300.9" dur="2.78"> ငါပုံပြင်ကိုတတ်နိုင်သမျှစိတ်ကူးနေတယ်။ >
< start="306.36" dur="3.2"> အဲဒီအစားကျနော်တို့စိတ်ကူးသွား။ သွားခဲ့ကြသည်ကိုညွှန်ပြလျှင် >
< start="309.56" dur="4.02"> ယခုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်နှင့်အမျှလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားမည်။ >
< start="314.08" dur="3.7"> ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဟာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ် >
< start="318.2" dur="2.4"> ပြproblemsနာများစွာရှိခဲ့သည်။ >
< start="320.6" dur="2.54"> REM: ငါထင်ထားတာထက်ကွဲပြားသွားတယ်။ >
< start="323.34" dur="0.96"> Davin ရဲ့အချိန်ကကုန်သွားပြီ >
< start="324.3" dur="1.04"> ရောမမွို့မှာ, ငါဒီဇိုင်းကိုငါထင်ထက်ကွဲပြားခြားနားထွက်လာ၏။ >
< start="325.34" dur="2.5"> ရုံ ... အရာအားလုံး ... ဝတ်စုံ။ >
< start="328.22" dur="2.32"> ငါတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး >
< start="330.96" dur="2.6"> မင်းဒီနေရာမှာမောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့် ... ငါနောက်တဖန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရှိသည်။ >
< start="338.06" dur="1.26"> တိုက်ရိုက်: အဆင်မပြေ? >
< start="341.04" dur="1"> Ian: ဟင့်အင်း၊ >
< start="342.46" dur="1.24"> ငါဘာကြောင့်ပြောင်းလဲတာလဲမသိဘူး >
< start="344.46" dur="3.02"> အနည်းငယ်ထူးဆန်းသောတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာစာသားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ >
< start="347.48" dur="2.38"> "အိုး, အနိမ့်တယ်, အနိမ့်တယ်" >
< start="350.4" dur="2"> ဒီတော့ CREAM ကပိုပြီးသဘာဝကျစေမှာပါ။ >
< start="353.1" dur="1.52"> ကောင်းပြီ၊ အဲဒီအသံကရိုက်တယ် >
< start="355.18" dur="2.12"> ဒါဟာစန္ဒရားအစိတ်အပိုင်းအတွက်သဘာဝဖြစ်လိမ့်မည်။ >
< start="357.3" dur="1.22"> ခရက်။ အရင်ဆုံးလုပ်ရအောင်။ >
< start="358.52" dur="1.18"> တိုက်ရိုက်: ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ပါ။ >
< start="379.06" dur="0.68"> LIVE: အမွေအနှစ် >
< start="379.74" dur="1.02"> သင်ကဒီဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ >
< start="382.58" dur="1.9"> အားကြီးသောအသံဖြင့် >
< start="390.58" dur="0.9"> အိုးသူကပြောတယ်ပျော်စရာ! >
< start="391.8" dur="1.68"> Ian: ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကနည်းနည်းပိုပါတယ် >
< start="393.98" dur="1.1"> မင်းခံစားရတယ် >
< start="418.6" dur="2.46"> အယ်လ်ဘမ်မဖြန့်ချိမီ2လ >
< start="426.64" dur="0.88"> REM: လိမ္မော်ရောင် >
< start="427.78" dur="1.78"> Eunbyeol (stylist) - လိမ္မော်ရောင်လား။ လိမ္မော်ရောင်ကျွန်တော်မလုပ်ရသေးပါဘူး >
< start="430.98" dur="0.76"> လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သင့် >
< start="431.74" dur="2.08"> REM: ဒီဟာကောင်းတယ်၊ လိမ္မော်ရောင် >
< start="433.82" dur="1.74"> အိုးစောင့်ပါ၊ အမှတ်တံဆိပ်ကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့သလား။ >
< start="436.16" dur="0.82"> အနက်ရောင် >
< start="437.44" dur="1.38"> လူတိုင်းကဒါကိုကြိုက်တယ် >
< start="439.16" dur="0.98"> Jeong Geun (stylist) - အဲဒါကိုငါ့လက်တွေမချွတ်နိုင်ဘူး။ >
< start="440.14" dur="2.22"> REM: ပထမ ဦး စွာ Jun Yong (Stylist Ashe) မျက်နှာဖုံးနှစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကမမှန်ဘူး >
< start="442.36" dur="0.88"> REM: ထုံးစံလား။ >
< start="443.24" dur="4.54"> Eunbyeol: ဘေးနားကမျက်နှာဖုံးကြိုးလိုမျိုးတစ်ခုခုရှိရင်ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ >
< start="450.06" dur="2.74"> သင်ဤကဲ့သို့သောဤနေရာတွင်ပူးတွဲနိုင်သည် >
< start="453.38" dur="1.92"> ကျွန်ုပ်ဤကဲ့သို့သောကြိုးလိုအပ်ပါတယ် >
< start="455.76" dur="1.5"> REM: ငါဆိုလိုတာကငါသိတယ်။ >
< start="457.96" dur="1.46"> Ian: ငါစဉ်းစားခဲ့ပြီးပြီ >
< start="459.42" dur="3.22"> အကယ်၍ Dabin တွင် bandana သို့မဟုတ်အနက်ရောင် bandana ရှိနိုင်လျှင်၊ >
< start="462.64" dur="2.2"> ငါ့ဘက်ခြမ်းကိုဖုံးအုပ်နိုင်အောင်။ REM: ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် >
< start="464.84" dur="0.86"> ငါအသံကြိုက်တယ် >
< start="478.92" dur="2.74"> Eunbyeol: Davin ကချွတ်လိုက်ရင်ဒါအဆင်ပြေပါတယ် >
< start="482.04" dur="0.58"> LIVE: အဆုံးလား။ >
< start="482.62" dur="0.84"> Silver Star: ကောင်းပြီ။ >
< start="485.04" dur="2.24"> Ian: ဘယ်လိုလဲ လမ်းလျှောက်လို့ရမလား? သင်ရွှေ့လို့ရမလား >
< start="487.78" dur="1.76"> LIVE: ဟုတ်တယ်၊ အဆင်ပြေတယ်။ >
< start="489.92" dur="2.26"> Ian: ဒါကမင်းရဲ့အိတ်နဲ့ချည်ထားလိမ့်မယ်။ >
< start="492.18" dur="0.58"> LIVE: ဟုတ်တယ်။ >
< start="494.34" dur="1"> Ian: ကောင်းပါပြီ။ >
< start="496.28" dur="3.46"> DPR သည်ဤအယ်လ်ဘမ်အတွက်ကြီးမားသောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း >
< start="499.74" dur="3.16"> လမ်းကြောင်းများစွာနှင့်မပြီးဆုံးသေးသောသရုပ်ပြများစွာမပြည့်စုံပါ။ >
< start="502.9" dur="3.48"> နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအသည်းအသန်ကြိုးစားသည် >
< start="506.38" dur="2.96"> Live သည်တိုတောင်းသောခရီးစဉ်ကိုတောင်း။ မြို့နှင့်ဝေးရာနေရာတစ်ခုတွင်သီဆိုခဲ့သည်။ >
< start="510.26" dur="2.3"> LIVE: ငါပြောင်းလဲပစ်ရန်အေးမြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ... ပြည်သူ့ >
< start="512.56" dur="2.26"> ဥပမာ - Ow, Rap >
< start="533.64" dur="2"> CREAM - အိုး၊ >
< start="535.64" dur="0.9"> အရမ်းကောင်းတယ် >
< start="551.4" dur="1.28"> LIVE: အလုပ်ကြိုးစားပါ ... >
< start="552.68" dur="1.04"> ကျန်းမာအောင်စားပါ။ >
< start="588.64" dur="3"> Stunt အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ - မင်းခံစားချက်ရရင်ငါတို့အခုရိုက်နေပြီ >
< start="591.64" dur="1.5"> ကင်မရာဆက်တင်များနှင့်ကိုက်ညီရန် >
< start="593.14" dur="1.76"> အဲဒီမှာသေးငယ်တဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံအောင်နေစဉ် >
< start="594.9" dur="0.74"> မင်းလုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ် >
< start="595.64" dur="1.14"> LIVE: ဟုတ်တယ်။ ငါကြည့်တယ် >
< start="611.22" dur="0.86"> Ninja လိပ် ... >
< start="613.4" dur="0.9"> ကောင်းတယ် ~ >
< start="616.06" dur="0.86"> ဘဝ -“ အလားအလာ” >
< start="619.42" dur="1.94"> [ရိုက်ကူးရေးနေ့မတိုင်ခင်] >
< start="631" dur="1.52"> Ian: ဟိုမှာကြည့် >
< start="640.8" dur="2.6"> အဲဒါထွက်လို့မရဘူးလား။ ဒါတွေအားလုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာပိုကောင်းလား။ >
< start="644.52" dur="1.68"> ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာလား >
< start="668.54" dur="1.36"> Hmm ကောင်းပြီ၊ အဆင်ပြေပါတယ် >
< start="674.12" dur="1.88"> [ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနေ့] >
< start="676.5" dur="1.52"> REM: ငါဒီကိုယူသင့်သလား။ >
< start="678.02" dur="1.08"> JunYong - ဟုတ်တယ်။ အဲဒီလိုပဲ >
< start="683.14" dur="2.2"> Cline: ငါလား ငါရပ်လိုက်တဲ့အခါငါအနည်းငယ်ရပ်တန့် >
< start="686.56" dur="1.38"> Yongwoo (မန်နေဂျာ) - ဟေ့၊ မင်းအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ >
< start="687.94" dur="0.72"> Cline: မရပ်ရ၊ တံတားမ ... >
< start="689.14" dur="0.9"> Ian: သွားကြရအောင် ... >
< start="690.92" dur="1.02"> သွားကြရအောင် ... >
< start="718.7" dur="3.86"> Hoin (ဒါရိုက်တာ) ။ လုပ်ပါ။ ကမ္ဘာမြေ အခုဒီအဖြူရောင်အရောင်လား? >
< start="729.14" dur="1.64"> ဟင်။ အိုး။ ဒီ“ ဥပဒေရေးရာ” အဝတ်လား။ LIVE: အိုးဒါကရက်ပ်အပိုင်းလား။ >
< start="731.28" dur="1.58"> Ian - ဟုတ်တယ်။ ပထမတော့ဒီလိုမျိုးစမယ်။ >
< start="732.86" dur="1.46"> အိုကေ၊ ဒါဆို NEON ဆိုပါစို့။ >
< start="734.32" dur="3.38"> ဒါပေမယ့် "LEGACY" ဟာတူညီတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့စတာပါ။ >
< start="756.62" dur="3.22"> JunYong: ငါဝေးတယ်။ အဲဒါကိုဖြည် >
< start="759.84" dur="1.64"> REM: မလင်းဘူး >
< start="761.48" dur="1.3"> ချွေးကြောင့်လို့ထင်တယ် >
< start="771" dur="0.88"> လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး - မင်းအသက်မရှူနေဘူးလား။ >
< start="783.32" dur="0.88"> Ian: အဆင်ပြေပါတယ် >
< start="785.82" dur="1.2"> မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှူး (Kim Min-chan) မင်းကမီးခိုးမြူတွေဖြန်းလား။ >
< start="787.02" dur="1.12"> mod: မီးခိုးမြူ! >
< start="791.26" dur="0.72"> LIVE - ကောင်းပြီ။ >
< start="791.98" dur="1.16"> Ian: အဲဒါမင်းရဲ့လက်ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်။ >
< start="793.86" dur="0.92"> အိုကေလား >
< start="794.78" dur="1.32"> ထို့နောက်ကျသောအခါသင်ဖမ်းလိုက်သည်။ >
< start="804" dur="0.96"> LIVE - ဒီတစ်ကြိမ်ထပ်လုပ်ကြည့်ရအောင်။ >
< start="804.96" dur="0.74"> Ian: ခင်ဗျားထပ်လုပ်ချင်လား။ >
< start="806.18" dur="1.28"> သင်ကခလုတ်ကိုထိနေတယ် >
< start="808.14" dur="1.2"> အမြင့်ပြောင်းပါ >
< start="809.34" dur="1.36"> သင်အမှန်တကယ်ကကားမောင်းနေကြသည်။ >
< start="829.76" dur="2.7"> Yongwoo: Dabin၊ မင်းအဲဒီကိုသွားရမယ်။ >
< start="832.62" dur="1.26"> Cline: Day2Ian: Day2>
< start="835.14" dur="1.04"> အေးမြ >
< start="836.48" dur="2.42"> ငါရုပ်ရှင်ရုံမှာကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ >
< start="839.36" dur="2.06"> ဒါကအတိအကျပဲ။ >
< start="842.48" dur="2.28"> သေချာတာပေါ့ >
< start="844.76" dur="3.46"> “ Space Odyssey” နှင့်“ Star Wars” တို့သည်အလွန်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ >
< start="848.76" dur="2.22"> ငါကြီးပြင်းလာတာမြင်ခဲ့သမျှ >
< start="852.2" dur="1.98"> ယခုငါတို့ဒီမှာသွား။ Geronimo >
< start="854.66" dur="0.6"> လှုပ်ရှားမှု ... ! >
< start="867.36" dur="1.14"> ရှေ့ကင်မရာနှင့်အတူ ... >
< start="869.46" dur="1.24"> သိပ်ပျော်စရာမဟုတ်လား >
< start="875.06" dur="1.48"> ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုရှိတယ် >
< start="879.36" dur="2"> သင်ခြံစည်းရိုးအဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်သည် >
< start="882.66" dur="1.76"> စွမ်းအင်ဖြင့် ... ပျော်ရွှင်ပါစေ။ >
< start="893.28" dur="0.74"> ငါသွားမယ်! >
< start="904.06" dur="0.86"> REM: ဒါပါပဲ။ >
< start="905.6" dur="1.12"> သွားကြကုန်အံ့! အဲ့ဒါပဲ! >
< start="911.04" dur="0.82"> အီနန် - ထ ... >
< start="912.86" dur="1.06"> ငါဘေးထွက်ကြည့်နေပါတယ် >
< start="915.56" dur="0.64"> LIVE - ကောင်းပြီ။ >
< start="958.22" dur="0.96"> Ian: အားလုံးကောင်းပါတယ်အားလုံးကောင်းပါတယ်။ >
< start="960" dur="0.98"> အစ်ကိုကျော်ပြီ။ >
< start="961.62" dur="1.2"> ဟုတ်တယ်၊ ပြီးသွားပြီ။ >
< start="962.82" dur="1"> လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ: ကောင်းမွန်သောအလုပ်! >
< start="963.82" dur="2.46"> အလုပ်ကောင်း >
< start="968.58" dur="2.44"> အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိမီ 1 လ >
< start="971.76" dur="2.72"> [Mixing Studio] REM - အပိုင်းနှစ်ပိုင်းစလုံးသည်ယဇ်ပူဇော်ဖို့လိုသည်။ >
< start="974.88" dur="2.22"> ကျနော်တို့အနုပညာဆီကိုအရမ်းဝေးသင့်တယ်မထင်ဘူး >
< start="977.1" dur="3.6"> ဥပမာအားဖြင့်“ အိုး၊ ဒီ decibel ကိုအနည်းငယ်နည်းနည်းလျှော့ဖို့လိုတယ်။ ” >
< start="980.7" dur="1.52"> ဒီလိုပဲ >
< start="982.22" dur="1.32"> ဟုတ်တယ်၊ ငါထပ်လုပ်လို့ရပြီ >
< start="983.54" dur="1.6"> ဒါပေမယ့်ငါတို့မပြန်ဘူး >
< start="985.14" dur="2.24"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ၊ >
< start="987.78" dur="2.24"> Ian: ဒါပေမဲ့ဒါ ... >
< start="991.82" dur="1.58"> REM: ငါတို့နောက်ကျမယ်ဆိုရင် >
< start="994.12" dur="4.66"> ဒါပေမယ့်ငါက ၁၀၀ ရာနှုန်း၊ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းနောက်ကျမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် >
< start="1004.76" dur="2.16"> ဒီစောင့်ကြည့်နေကြသူတွေကိုပြောပြရန် >
< start="1008.44" dur="2.66"> ငါတို့တကယ်နီးကပ်လာပြီ။ >
< start="1011.5" dur="2.1"> ငါ့အခန်းကဏ္ in ရှိလူတိုင်းအတွက် >
< start="1015.02" dur="2.96"> ဤအရာသည်စိတ်ဖိစီးမှုအများဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ >
< start="1018.72" dur="2.02"> ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ကြသည် >
< start="1022.02" dur="2.64"> ငါတို့အချင်းချင်းမွမ်းမံတယ် >
< start="1024.66" dur="4.14"> ငါကဤအရာအားလုံးကိုထုပ်ပိုးမယ်ဒါကြောင့်ငါနောက်ဆုံးမိတ္တူကို mastering ပေးပို့နိုင်ပါတယ် ... >
< start="1031.14" dur="2.42"> ငါအခုတော်တော်လေးစိတ်ဖိစီးမှုတယ် >
< start="1050.14" dur="2"> String ဒါရိုက်တာ - ၉၃ နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်မှကူးယူပါ။ >
< start="1052.14" dur="3.82"> ငါ Tremolo အကြာတွင်အလားတူပြုလိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ် >
< start="1066.18" dur="6.52"> လက်ရှိသီချင်း "KISS ME" နှင့် "NO RESCUE NEEDED" ၏ကြိုးများကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်အဖွဲ့သည်ဂီတဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ရောနှောခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ >
< start="1072.7" dur="6.06"> သို့သော်အချိန်အကန့်အသတ်များနှင့်သတ်မှတ်ရက်များအရ DPR သည်သူတို့၏ကျန်ရှိနေသေးသောအချိန်ကိုမည်မျှထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုဖန်တီးရန်လိုသည်။ >
< start="1081.12" dur="5.6"> REM: ယနေ့ငါနှင့် Cream အင်ဂျင်နီယာများမှပေးပို့သောပေါင်းစပ်မှုအားလုံးသည်မှတ်စုတိုမှတ်စုများဖြစ်သည်။ >
< start="1087.32" dur="5.06"> ငါတို့အတူတကွစုစည်းပြီး Dabin ကိုနောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုများတောင်းခံပါတော့မယ်။ >
< start="1092.38" dur="3.76"> တိုက်ရိုက်: ဒါ ... နေ့ (x9) >
< start="1101.14" dur="2.6"> နောက်ထပ် ... ရှေ့ပေါ် ... ရှေ့ချိတ်ပေါ်မှာ >
< start="1105.14" dur="2.92"> ကျွန်တော်နည်းနည်းနဲ့ကိုက်ညီမယ်လို့မထင်ဘူး ... >
< start="1108.24" dur="2"> Lowe ... တစ်ခုခုပဲ >
< start="1110.24" dur="2.36"> "အိုး - အိုး" ဒါဒီလိုဖြစ်လာတယ် ... >
< start="1112.6" dur="3.1"> လိုအပ်ချက်များ ... "အိုးအိုး" >
< start="1126.58" dur="1.24"> မှ Ian: ဤကဲ့သို့သောအသံလိမ့်မယ် ... >
< start="1129.22" dur="1.2"> အလွှာအလွှာ။ >
< start="1153.68" dur="0.92"> LIVE -“ ဒါဆိုငါရိုက်တယ်” … >
< start="1154.6" dur="1"> Ian: မှန်တယ်၊ >
< start="1156.7" dur="4.14"> ၎င်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအသံရှိပါသလား။ >
< start="1164.46" dur="1.16"> LIVE ။ >
< start="1170.42" dur="2.42"> LIVE & IAN: အိုး၊ နောက်ဆုံးတစ်ခု၊ နောက်ဆုံးတစ်ခု။ >
< start="1172.84" dur="1.32"> တိုက်ရိုက် - နားထောင်ပါ။ >
< start="1174.16" dur="2"> Ian: အသံကိုဖွင့်ပါ။ >
< start="1187.76" dur="1.26"> Ian: မူလကဘာလဲ >
< start="1191.34" dur="1.7"> REM: ဒါဟာနိမ့်ပါတယ် Ian: ဟုတ်တယ်။ >
< start="1193.04" dur="2.7"> ငါ ... ဒါပေမယ့်ငါကပိုအသုံးပြုတယ်။ >
< start="1196.4" dur="1.24"> REM: ငါဒီထက်ပိုပြီးလုပ်နေတယ်။ >
< start="1201.2" dur="0.84"> အိုကေ ~ >
< start="1204.46" dur="5.36"> Ian: "ဒီမှာဘာမှမဖြစ်" ၏သံပြိုင်ကစားနေပါတယ်။ >
< start="1209.82" dur="5.22"> ငါဒီသီချင်းကိုလူ ၆၀ ပါ ၀ င်ပုံပေါက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။ >
< start="1215.04" dur="2.74"> ဒါမလွယ်ဘူး ကောင်းပြီ၊ နားထောင်ကြရအောင် >
< start="1217.78" dur="1.82"> LIVE: အိုကေအိုကေအိုကေ >
< start="1234.44" dur="1.12"> ဟုတ်တယ် >
< start="1235.56" dur="1.16"> အခုပြီးသွားပါပြီ >
< start="1237.5" dur="2.68"> ဒီသီချင်း ... လာမယ့်သီချင်းနေတုန်းပဲ။ >
< start="1256.74" dur="2.58"> အခုငါလုပ်မယ့်အရာက NEON နိဂုံးဖြစ်တယ် >
< start="1261.16" dur="2.54"> မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ “ မင်းရဲ့အနမ်းတွေကငါ့ကိုလှည့်စားစေတယ်” သို့မဟုတ်စာသားများကဆက်ပြောသည် >
< start="1263.7" dur="2.82"> “ မင်းရဲ့အနမ်းတွေကနီယွန်၊ နီယွန်တွေထွက်လာတယ်” ထွက်လာသည် >
< start="1266.52" dur="2.18"> ငါကအေးတယ်ထင်တယ် >
< start="1268.7" dur="1.74"> အဆိုပါသံပြိုင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="1270.44" dur="1.54"> အဲဒါကို "Neon" လို့ခေါ်တယ် >
< start="1272.26" dur="3.7"> လူတွေဟာနီယွန်ကိုတွေ့မြင်ခံစားနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ငါဆိုလိုတာကမင်းသိလား ဒီတော့ >
< start="1282.12" dur="0.86"> မသေချာဘူး >
< start="1282.98" dur="1.26"> Ian: အိုကေ ... ကောင်းတယ်ထင်တယ် >
< start="1284.24" dur="3.42"> LIVE: ထိုအခါ "ခရမ်းရောင်၊ အပြာ၊ ခရမ်း၊ ပန်းရောင်" နောက်မှ "you" ဟုပြောပါ။ >
< start="1287.66" dur="0.56"> Ian - ကောင်းပါပြီ။ >
< start="1288.22" dur="2.16"> ငါလောက်ပြီထင်တယ် >
< start="1290.38" dur="1.6"> ဒါပြီးပြီလို့ငါထင်တယ် >
< start="1291.98" dur="3.44"> ရောနှောခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့သည်ထာဝရအဆုံးသတ်ပုံမပေါက်သောနောက်ဆုံးတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ >
< start="1295.42" dur="3.64"> ရောစပ်ခြင်းပြီးဆုံးပြီ။ master studio သို့သွားရန်အချိန်တန်ပြီ ... >
< start="1300.38" dur="1.22"> တိုက်ရိုက်: မာစတာ >
< start="1314.12" dur="1.24"> CREAM - အဆင်ပြေပါတယ်။ Awesome LIVE: အဲဒါတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ >
< start="1320.52" dur="3.72"> ငါ "ကယ်ဆယ်ရေးမလိုအပ်" ၏အဆုံးအရေးကြီးသောထင်ပါတယ် >
< start="1324.84" dur="1.84"> အသံမထွက်ခင်ဒီမှာရပ်နားကြရအောင် >
< start="1333.4" dur="1.04"> ကျွမ်းကျင်သူဒါရိုက်တာ။ >
< start="1334.44" dur="1.16"> REM: အစ်ကို၊ >
< start="1336.86" dur="1.06"> LIVE: ငါမကြာခဏလာလိမ့်မည်။ >
< start="1338.4" dur="1.7"> REM: ကျွန်တော့်အစ်ကိုလည်းလာကစားသည်။ >
< start="1340.1" dur="1.64"> မာစတာဒါရိုက်တာ: ငါကစားသွားကြဖို့ရှိသည် ... >
< start="1341.74" dur="1.1"> CREAM - ကျွန်တော့်အစ်ကိုလည်းအလုပ်များနေတယ်။ >
< start="1344.04" dur="1.08"> [Teaser ထုတ်ပြန်သည့်နေ့] Yongwoo: အရမ်းကိုအေးဆေးပဲ။ >
< start="1345.12" dur="0.74"> ငွေစတား။ >
< start="1347.14" dur="2.68"> Ian - သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ... REM: အဲဒါကို Vimeo မှ 4k HD ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ချခဲ့သည်။ >
< start="1349.82" dur="2.68"> Ian: 4k ဟာအနည်းငယ်မှောင်မိုက်နေတယ်။ ဒါကြောင့် REM: stop ။ စိတ်အေးအေးထားပါ >
< start="1352.5" dur="2.46"> REM: မင်းကထူးဆန်းတဲ့ဆေးတစ်ခုယူခဲ့တယ်။ >
< start="1354.96" dur="2.92"> သင် 4k လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကိုသောက်ခဲ့တယ်။ Ian: မဟုတ်ပါ။ ဤသည်မှာအလုပ်ခွင်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ >
< start="1357.88" dur="2.66"> REM: အမှတ် ၎င်းသည် "အသုံးမကျသောရောဂါ" ဖြစ်သည်။ >
< start="1360.54" dur="1"> Ian: ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ >
< start="1361.94" dur="1.94"> ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်မရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ >
< start="1364.08" dur="1.02"> တိုက်ရိုက်:4မိနစ် >
< start="1368.9" dur="1.24"> ၃ မိနစ်သာကျန်တော့သည်။ >
< start="1371.26" dur="1.36"> မုန့် - သင်နှင့်စတင်ပါ >
< start="1373.68" dur="1.08"> တိုက်ရိုက်: ၂ မိနစ် >
< start="1374.76" dur="1.3"> ကမ္ဘာကြီးကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ >
< start="1377.1" dur="1.04"> ကမ္ဘာကြီးကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ >
< start="1378.14" dur="1.22"> ငါအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့မထင်ဘူး >
< start="1379.88" dur="0.62"> အိုး ငါ upload တင် !!! >
< start="1382.48" dur="0.88"> CREAM & Silver Star - သင်တင်ပို့ခဲ့သလား။ >
< start="1400.32" dur="5.88"> Ian - ကျွန်ုပ်၏ ၁၀၁ ကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုကိုကြိုဆိုပါသည်။ >
< start="1406.2" dur="2.62"> ဒါငါ့အိမ်သေးသေးလေးပါ။ >
< start="1408.82" dur="2.1"> ငါ့အိမ်မှာတည်းဖြတ်ရတာကိုကြိုက်တယ် >
< start="1410.92" dur="0.9"> ငါ့ကိုနှစ်သိမ့်လို့ပဲ >
< start="1411.82" dur="2"> ဒီတစ်ခုရှိတယ် >
< start="1415.38" dur="1.52"> ရီ: ငါ ... ကျေးဇူးပြု၍ ကျွမ်းကျင်ပါ >
< start="1417.26" dur="2.84"> ယခုငါ "LEGACY" တည်းဖြတ်နေပါတယ်။ >
< start="1420.1" dur="2.54"> ဒါကပထမဆုံးဂီတဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းပဲ။ >
< start="1422.64" dur="10.46"> တည်းဖြတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်း၏ ၆၀-၇၀% ခန့်ဖြစ်သည် >
< start="1433.1" dur="4.98"> ကြွင်းသောအရာစီစဉ်, ရိုက်ကူးနေကြတယ် ... >
< start="1440.26" dur="1.28"> ကောင်းတယ် >
< start="1441.54" dur="2.7"> ဒီဗီဒီယိုကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ >
< start="1444.24" dur="4.42"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုက Da Vin ဟာစကြဝnewာအသစ်ကိုရောက်လာပြီလို့ဆိုလိုတာပါ။ >
< start="1448.66" dur="0.84"> ဒါကအဓိကအချက်ပဲ။ >
< start="1449.5" dur="10.06"> အယ်လ်ဘမ်သည်မည်သည့်နေရာမှမရှိဤသည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနေသော“ DPR စကြဝuniverseာ” အသစ်သို့ခရီးဖြစ်သည်။ >
< start="1459.56" dur="1.8"> ဒါကအစပဲရှိသေးတယ် >
< start="1461.36" dur="1.88"> ရေခဲတောင်၏အစွန်အဖျား >
< start="1465.18" dur="1.4"> ဂိမ်းကစားတာနဲ့တူတယ်။ >
< start="1471.56" dur="2.9"> ကျနော်တို့အဲဒီမှာကျော်အနည်းငယ်မှန်ဘီလူးမီးတောက်ချသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ >
< start="1474.92" dur="1.64"> လိမ္မော်ရောင်ဖယ်ရှားလိုက်ရင် ... >
< start="1478.62" dur="2.34"> ငါ့မျက်နှာပျောက်သွားတယ် ... >
< start="1480.96" dur="2.5"> တေးဂီတဗီဒီယိုအားပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်သည် >
< start="1483.46" dur="3.38"> အဖွဲ့သည်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဂီတဗီဒီယို Premiere နှင့် album နားထောင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ - @ iiseseoul >
< start="1499.48" dur="1.76"> REM: xx ကိုသွားရအောင် >
< start="1501.24" dur="1.42"> KK: Damm >
< start="1504.9" dur="1.02"> REM: ဒါကိုဘယ်သူလုပ်တာလဲ။ >
< start="1505.92" dur="1.24"> TK & KK: မှန်တယ် (x3) >
< start="1507.16" dur="1.46"> KK: Rom (IAN) xx ငါဖျားနာနေတယ်။ xx >
< start="1508.62" dur="1.84"> LIVE: ငါဒီလိုတုန့်ပြန်လို့ငါပျော်တယ် >
< start="1527.26" dur="2.34"> KK: ပရိသတ်များဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="1529.6" dur="3.52"> ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာငါမသိဘူး >
< start="1533.12" dur="1.38"> အရူး >
< start="1534.5" dur="2"> ဘာမှမရှိဘူး။ >
< start="1536.5" dur="4.74"> TK: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားစီမံကိန်းများကိုကြည့်ပါကဂီတကောင်းလျှင်ဗီဒီယိုသည်အနည်းငယ်နည်းနေသည်။ >
< start="1541.24" dur="1.22"> ချို့တဲ့သည်။ >
< start="1542.46" dur="0.92"> REM - အားနည်းတဲ့ချိတ်ဆက်မှု >
< start="1543.38" dur="3.8"> KK: ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ >
< start="1547.18" dur="2.22"> ဒါရူးတာပဲ >
< start="1552.06" dur="1.76"> အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲ >
< start="1557.64" dur="1.48"> တိုက်ရိုက်: ၃၇ မိနစ် >
< start="1559.12" dur="1.88"> ငါစိုးရိမ်လာတယ် >
< start="1564.72" dur="3.94"> REM: ငါတို့ကယောက်ျားတွေထက်ပိုပြီးကြောက်ကြတာပဲ! >
< start="1571.52" dur="2.18"> LIVE: ဒီခံစားချက်ကတကယ်ကို ... >
< start="1573.7" dur="2.02"> ဒါကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးရည်းစားထက်ပိုပြီးတုန်နေတယ် >
< start="1575.72" dur="1.48"> မင်းရူးနေလား >
< start="1577.2" dur="1.84"> မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား >
< start="1579.06" dur="1.86"> ငါအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့မထင်ဘူး >
< start="1580.92" dur="1.38"> Ian: ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ။ မှတ်ချက်များကဘာတွေလဲ။ >
< start="1582.3" dur="1.8"> LIVE: အထက်မှဖတ်၊ ဖတ်၊ ဖတ်ပါ။ >
< start="1586.2" dur="1.46"> Guhyo (ဒရမ်သမား) ၁၀ မိနစ် >
< start="1589.76" dur="2"> REM - လူတိုင်းကအဆင်သင့်ပဲ။ >
< start="1594.5" dur="1.62"> LIVE: အိုး၊ >
< start="1596.14" dur="2.68"> REM: ငါ skydiving လို့ထင်တယ် >
< start="1598.82" dur="1.48"> LIVE ။ >
< start="1601.94" dur="1.54"> ဟာရစ် (ဘေ့စ်) - အိုး။ တစ်မိနစ်ကျန် >
< start="1611.9" dur="1.36"> အာ ထွက်လာ! >